Itemu tattoo kungaba yini - ngesiRashiya, isiJalimane, isiNtaliyane, isi-Latin. Yiqiniso, amalebula angaphandle athandwa kakhulu kunanoma iyiphi enye. Kodwa lapha kubalulekile ukukhetha ibinzana for tattoo nokudluliswa - ngoba incazelo kubaluleke kakhulu. Ngokuvamile, mangisho, lesi sihloko kumba eqolo, futhi kufanele ucabangele ke kabanzi.
izingcaphuno ezingaphelelwa isikhathi
Ngokuvamile, inkulumo ethi ngoba tattoo ethathwe izincwadi. Wonke umuntu uyazi umuzwa lapho, phakathi nokufunda umsebenzi wokubhala kukhona ibinzana yokuthi uhlala kuze kube phakade kwimemori. I Kungashiwo okufanayo mayelana ingoma noma ivesi, bese movie kakhulu. Quote kungenziwa sithathwa emongweni isebenza ngokuphelele noma isiphi isiqondiso futhi uhlobo. Futhi abaningi ziyaxazululwa walithumba ngakuyena ukuze uhlale naye ukuphila. Ungase uthi benza "okuphakade tattoo kwikhotheshini." Abanye abantu banqume ukugcwalisa ibinzana okungokukaNkulunkulu ubuqambi yabo. Eqinisweni midwebo ungasho okuningi mayelana umuntu ogqoka kubo, - ngesimilo sakhe, indlela abheka ngayo ukuphila. Ngokwesibonelo, Malo mori Guam foedari (ezibangelwa isigaba ezinjalo, njengoba okucashunwe "ibinzana ngesiLatini Tattoo"), elihunyushwe kanje: ". Ukufa phambi ihlazo" Angakwazi ukuthi umnikazi walo - umnumzana, banesibophezelo sezenzo zabo futhi amazwi, ngubani uyakwazisa isithunzi engalinaki amanga amambuka. Kunengqondo ukuphetha ngokuthi ibinzana kancane, kodwa bangaki ungasho mayelana ngubani emzimbeni wakho, uma ukwazi ukuhumusha nokwenza ukuhlaziya kancane.
Abantu abaningi ukutshala ibinzana okwesikhathi incazelo tattoo wayo. Ezinye ukuya salon sigxilise unomphela emzimbeni ukuthi uzonikhumbuza yimuphi umcimbi obalulekile noma impumelelo. Abanye, kunalokho, wenze umbhalo oqoshwe kukhunjulwa basuka ukuphila kwabo. Nokho, akuwona wonke umuntu ongase akwazi ukwenza okuningi kwakungeke ubuhlungu ukubona ku isikhumbuzo nsuku zonke ngokwakho akuyona umcimbi engcono kakhulu ekuphileni kwami. Abanye benza tattoo yokuthi kuyoba kuyaqondakala kuphela kubo - mhlawumbe njengoba isisusa ukufeza umgomo othile. Ngithanda ukubalula esinye isibonelo ezithakazelisayo - abaningi njengophawu uthando nokuzinikela lebhola yakhe emzimbeni wakhe Isiqubulo eyayigcwele leqembu noma club. Abangane abaseduze noma abathandi ngokuvamile ukwenza imidwebo ngokuhlanganyela, ukugcwalisa umusho kabani incazelo kucacile kubo kuphela.
Ngezinye izikhathi umusho ekhethwe kahle kungaba ukuveza angaqondakali ezingaphezu kwenkulungwane amazwi. Vele kudingeka ukuthole. Futhi, okubaluleke kakhulu, uma kuwukuthi olunye ulimi, qiniseka odinga ukukwazi nokuhunyushelwa kwalo ngqo. Ngoba ngezinye izikhathi kuyenzeka isimo kazusnye kakhulu, ngokuvamile nabalingiswa. Lapho umbono amahle ibinzana ngolimi Japanese noma isi-Korean elihunyushwe ngokuthi "ukwakheka: ushukela, usawoti ..." kunokuthi "uthando uyowahluthula kithi waba yizicucu." Ngoba uma ngifuna ngizibeke emzimbeni umlingisi ke kudingeka ube 100, noma ngisho 200 amaphesenti eliqinisekile ukudluliswa wakhe, kungcono ubonane sezilimi. Nakuba tattoo okuyinhloko nokucwala ezikhethekile ngokuvamile wazi ukuthi amakhasimende zabo eyayigcwele. Maqondana nezinye izilimi wesinye isizwe ungumthombo lubelula - isibonelo, umbhalo ngesiNgisi musa kube nzima, ngoba cishe sonke kuba ezijwayele. Kodwa okuhle nakakhulu wukuthi ukubheka tattoo imishwana elihunyushwe. Okungenani, ukuthula kwakho kwengqondo.
Njengoba sekushiwo, ibinzana for tattoo alithandeki namuhla. On umzimba wakhe babangela ikakhulukazi labo bantu abafuna ukuhlukanisa yena kuzo zonke ezinye izici, futhi ukukwenza ngokwakho. Bambalwa abantu kungaba kusimangaze kwakunemibhalo eqoshiwe, kodwa uma uvumela emcabangweni wakho run zasendle, uthola tattoo esingangaleso esingalotshwa uzibuthe uyokhanga iso. Masters othanda ukuba ulinge ngamafonti. Kukhona nje alikho - ezisukela zakudala ziphethe Gothic. Ngokuvamile ephelezelwa ibinzana for umdwebo tattoo of yisiphi isithombe, umfanekiso, futhi ngezinye izikhathi nje "kukhona" ukupheqa. Iphinde ibuke ngempela ezithakazelisayo. Imibhalo eqoshiwe maKristu abizwa Tattoos yesikhumbuzo, ngokuvamile abantu isetshenziswa noma usuku noma igama noma amagama, kanye izingcaphuno eziphawuleka ngokukhethekile. Abanye abantu bathanda izame umbala, okuyinto nje nenqwaba yonkulunkulu kuhle inani amafonti ekhona. Empeleni, ungakwenza ngokuphelele yimuphi tattoo. Ukuze uthole ngempela eliphezulu, enhle futhi iqine, kodwa hhayi ngoba "portakom" njengoba ushayele master isithombe kabi eyayigcwele, kufanele uthintane ne professional, cela ukuthuthukisa emfushane futhi Yiqiniso, inani kunalokho enkulu ukuchitha kuso. Kodwa tattoo ezenziwa umculi abafanelekayo, ngokwakho umqondo kanye eliphezulu upende wakhe kuyoba sekupheleni kokuphila ukujabulisa nge ukukhanya yayo.
A amazwi ambalwa Ngithanda sithini ngale ndaba. Abaningi ngowokuqala ukuhlola ibinzana enhle tattoo, bese ukhetha indawo lapho ukubukisa yombhalo oqoshiwe. Abanye abantu wenze okuphambene. Kodwa iqiniso liwukuthi - namuhla kwakunemibhalo eqoshiwe eyayigcwele cishe kuyo yonke indawo. Chest, ohlangothini kwangaphakathi noma elingaphandle ngemilenze, izandla, emuva, intamo - kungaba noma iyiphi ingxenye yomzimba womuntu. Konke kuncike kuye. Lapho efuna ukubona tattoo - futhi lukhona nalo. Ukuze niphumelele akunankinga ukubeka ngisho ku yomgogodla, ngisho esandleni.
Uwoyela linseed ngoba imibimbi: ukubuyekezwa, zokupheka
Izitofu zegesi ezine-gas control of the oven and burners. Amathiphu wokukhetha
Apple Tree "Gloucester": incazelo ezihlukahlukene, izithombe